पिएसजीको टाउको दुखाइ : मेस्सी, नेयमार, रामोस वा एम्बाप्पे, कसले हान्ने पेनाल्टी ? – Dainik Sangalo
पिएसजीको टाउको दुखाइ : मेस्सी, नेयमार, रामोस वा एम्बाप्पे, कसले हान्ने पेनाल्टी ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३०, २०७८ समय: १३:२९:३८
स्टार खेलाडीहरूमा भरपुर खर्च गरेको फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी)लाई अर्को टाउको दुखाइ आइपरेको छ । सुरुआती ११ मा क–कसलाई राख्ने ? दुई उत्कृष्ट गोलरक्षकमध्ये कसलाई पोस्टको जिम्मा सुम्पिने ? लगायत प्रश्नले घेरिएका बेला अब कसले पेनाल्टी हान्ने ? विषय पिएसजीका लागि टाउको दुखाइको विषय आइपरेको हो ।
हाल पिएसजीसँग चार पेनाल्टी विषेशज्ञ छन्, लियोलन मेस्सी, सर्जियो रामोस, नेयमार र किलियन एम्बाप्पे । उनीहरू चारैजना पेनाल्टी हान्न माहिर छन् । पिएसजीमा एम्बाप्पे र नेयमारले पेनाल्टी प्रहार गर्दै आएका थिए । त्यसपछि रियल मड्रिडका ‘पेनाल्टी किङ’ रामोस थपिए । यस्तै, बार्सिलोना छोडेर मेस्सी पिएसजीमा आएसँगै मुख्य प्रशिक्षक मौरिसियो पोचेटिनोलाई पेनाल्टीको विषय टाउको दुखाइ बन्ने भएको हो ।
पेनाल्टी प्रहारमा रामोसको रेकर्ड उत्कृष्ट छ । उनले पछिल्ला १० पेनाल्टीमध्ये सबै पेनाल्टीमा सफलता हात पारेका छन् । उनको समूहमा यो एक कीर्तिमान नै हो । यता, नेयमार र एम्बाप्पे दुवैले पछिल्ला १० मध्ये नौ पेनाल्टीमा गोल गरेका छन् । मेस्सी पनि पेनाल्टीमा प्रभावकारी मानिन्छन् । उनले पछिल्ला १० मध्ये आठ पेनाल्टीमा गोल गरेका छन् ।
पेनाल्टीमा मात्र नभएर फ्रि–किकमा पनि यो समस्या नरहला भन्न सकिँदैन । यी चारै खेलाडी फ्रिकिकमा पनि अब्बल मानिन्छन् । तर यी चारमध्ये कसले प्रहार गर्ने भन्ने विषय पनि पोचेटिनोका लागि टाउको दुखाइ बन्ने निश्चित छ ।
Last Updated on: August 14th, 2021 at 1:29 pm